छोरीसँग डराउँछन् अजय, आमा रुँदा टाइगरलाई टेन्सन – Etajakhabar
छोरीसँग डराउँछन् अजय, आमा रुँदा टाइगरलाई टेन्सन
पर्दामा दसाैँ गुण्डालाई तह लगाउने दबङ रोलमा देखिने भए पनि वास्तविक जिन्दगीमा भने बलिउडका केही सुपरस्टार निकै डरपोक छन् । डरपोक यसर्थमा कि कुनै गल्ती गर्दा उनीहरू कसैले आमाको पिटाइ नै खाने गरेका छन् त कसैले बाबुको । अनि कोही छोराछोरीसँग थरथर हुन्छन् । भारतीय अनलाइनले केही सेलेब्रेटी कोसँग डराउँछन् भन्नेबारे रिपोर्ट बनाएको छ ।
माधुरीलाई बाबुसँग डर अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचाहिँ बाबुसँग निकै डराउँछिन् । सुटिङमा सधैँ उनका बाबु सँगै हुने गर्दथे । जसकारण कुनै पनि कुरा झुट बोल्ने, ढाट्ने अवस्था नै हुँदैनथ्यो । केही गरी कुनै कुरा झुटो बोलियो र बाबुले थाहा पाए भने उनका बाबु बोल्न बन्द गर्दथे । जब बाबु आफूसँग बोल्दैनथे, तब माधुरीले आफूबाट केही गल्ती भएको चाल पाउँथिन् । बाबुले निकै माया गर्ने भएकाले उनी रिसाउँदा आफूलाई निकै डर लाग्ने माधुरी बताउँछिन् ।
बाबुले हुर्मत लिन्छन् शाहिदको शाहिद बाबु पंकज कपुरसँग निकै डराउँछन् । बाबुको रूपमा आफूलाई कहिल्यै गाली नगरेको भए पनि निर्देशकका रूपमा भने बाबुले आफ्नो हुर्मत लिने गरेको शाहिद बताउँछन् । त्यसैले उनी बाबुसँग सधैँ सहज रहन्छन् । बाबुले उनजस्तै पर्फेक्ट अभिनेता बनोस् भन्ने चाहेकाले सधैँ आफूलाई निगरानीमा राख्ने गरेको शाहिद बताउँछन् ।
छोरीसँग डराउँछन् अजय एक्सन हिरो अजय देवगणलाई छोरी न्यासासँग निकै डर लाग्छ रे ! न्यासाले आफूलाई निकै गाली गर्ने भएकाले डर लाग्ने अजय बताउँछन् । छोरीले आफ्नो हरेक काममा नजर राख्ने र कतै गल्ती, कमजोरी भए कराइहाल्ने अजय सुनाउँछन् । उनी आफूले कुन फिल्ममा राम्रा अभिनय गरियो, कुनमा ओभर एक्टिङ गरियो भन्ने कुरा छोरीको कमेन्टबाट थाहा पाउँछन् । छोरीको हस्तक्षेपका कारण कतिपय फिल्म अस्वीकार गरेको समेत अजय बताउँछन् । छोरीको सुझाब अपनाउनाले आफूलाई फाइदा भइरहेको उनी बताउँछन् । उनी छोरीलाई कहिल्यै रिसाउन नदिने कोसिसमा रहन्छन् ।
आमाको थर्काइमा प्रीति प्रीति जिन्टा आमादेखि निकै डराउँछिन् । बच्चैदेखि आमाले कडा नीति नियम लगाएकाले प्रीति डराउने गरेकी हुन् । पार्टीबाट अबेर घर पुग्यो भने उनकी आमा ढोकामै कुरिरहेकी हुन्छिन् । किन ढिलो भयो भनेर स्पष्टीकरण दिनका लागि बाटोमै प्रीतिले विभिन्न बहाना सोच्नुपर्दथ्यो । आमाले गर्ने गाली र दिने सजाय कडा हुने भएकाले आफू सधैँ सजग हुने गरेको प्रीतिको स्मरण छ ।
आमा रुँदा टाइगरलाई टेन्सन टाइगर श्राफ आमादेखि डराउँछन् । खासगरी आमाको आँसुदेखि उनलाई डर लाग्ने गर्दछ रे ! उनकी आमाको सानो–सानो कुरामा पनि धेरै तनाव लिने बानी छ । उनी साह्रै भावुक स्वभावकी छिन् । आमा रोइन् भने बाबु ज्याकी पनि रुने अनि आफू पनि रुने भएकाले हत्तपत्त आमाको आँखाबाट आँसु नझरोस् भन्ने कामनामा हुने गर्छन्, टाइगर । आमा रुँदा उनलाई के भयो भनेर निकै डर लाग्ने उनी बताउँछन् । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ०५, २०७४ समय: १२:१४:५०